Ụgbọ elu Hawaiian na -akwaga na Tom Bradley International Terminal na LAX
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Ụgbọ elu Hawaiian na -akwaga na Tom Bradley International Terminal na LAX
Ndị ọbịa si LAX na-apụ na Hawaii kwesịrị iwepụta ihe dị ka nkeji iri na ise ka ha ga-ebugharị site na mbata ụlọ elu nke atọ n'ime Tom Bradley International Terminal gaa West Gates site n'okporo ụzọ dị n'okpuru ala.
N'October 12, ụgbọ elu Hawaiian na -akwaga na Terminal 5 wee malite ịnabata ndị njem na Terminal B na ọdụ ụgbọ elu mba ụwa nke Los Angeles.
Ndị ọbịa ụgbọ elu Hawaiian na -aga ma na -alọta Hawai'i site na LAX ga -enwe ọmarịcha ụlọ ọgbara ọhụrụ.
Hawaiian na-enye ọgụ isii kwa ụbọchị n'etiti LAX na agwaetiti Hawaii, gụnyere ọrụ ugboro atọ kwa ụbọchị na Honolulu, yana ijere Kahului otu ụbọchị na Maui, Kona na agwaetiti Hawaii, na Lihue na Kauai.
Ụgbọ elu Hawaiian ga -enwe ụlọ ọhụrụ na ọdụ ụgbọ elu Los Angeles International Airport (LAX) na Tuesday, Ọktoba 12, mgbe ọ ga -esi na Terminal 5 pụọ wee malite ịnabata ndị njem na Terminal B, nke a makwaara dị ka Tom Bradley International Terminal.
Ndị ọbịa Hawaiian na -aga ma na -alọta site na Hawai'i site na LAX ga -enwe ọmarịcha ụlọ ọgbara ọhụrụ nke nwere ọtụtụ ihe oriri, nhọrọ iri nri na ịzụ ahịa na mpaghara ọnụ ụzọ sara mbara.
Hawaiian ụgbọ na -enye ọgụ isii kwa ụbọchị n'etiti AHỤ na agwaetiti Hawaiian, gụnyere ọrụ ugboro atọ kwa ụbọchị na Honolulu, yana ijere Kahului otu ụbọchị na Maui, Kona na agwaetiti Hawaii, na Lihue na Kauai.
Jeff Helfrick, osote onye isi oche ọrụ ọdụ ụgbọ elu kwuru, "Anyị nwere ekele maka nkwado nke ọdụ ụgbọ elu ụwa Los Angeles na mbugharị anyị na Terminal B, nke ga -enye ndị ọbịa anyị ahụmịhe ka mma ma ha na -amalite ezumike Hawaii ma ọ bụ ịlaghachi n'ụlọ." Hawaiian ụgbọ.
Justin Erbacci, onye isi oche ọdụ ụgbọ elu ụwa nke Los Angeles kwuru, "Mgbe ụgbọ elu Hawaiian na -abanye n'ụlọ ọhụrụ ya na West Gates na Tom Bradley International Terminal, ndị njem ga -anụ ụtọ otu n'ime ọdụ ụgbọ elu ụwa kachasị ọhụrụ na teknụzụ. “AHỤ ghọrọ ebe ụgbọ elu mbụ nke United States Hawaiian ụgbọ elu karịa afọ 35 gara aga, anyị na -atụkwa anya ịga n'ihu ogologo mmekọrịta anyị na -ejikọ Hawaii na Southern California. ”
Ndị ọbịa na -apụ na Hawaii si AHỤ kwesịrị iwepụta ihe dị ka nkeji iri na ise iji gafere site na mbata ụlọ elu nke atọ n'ime Tom Bradley International Terminal gaa West Gates site n'okporo ụzọ dị n'okpuru ala. Ndị ọbịa Hawaii na-abata na LAX site na Hawaii ga-eburu akpa elele na nkwupụta akpa nke mbụ. Ndị njem nwekwara ike jikọọ n'etiti West Gates na Terminals 15-4 site na paseeji na-enweghị isi na-enweghị mkpa ikpochapụ nchekwa ọzọ.